Duq magaalo oo dadkiisa uga digaya inaysan Oslo u safrin. - NorSom News
Duq magaalo oo dadkiisa uga digaya inaysan Oslo u safrin.
Arnt Abrahamsen oo ah duqa magaalada Farsund ee gobolka Agder ayaa dadka magaalada uu duqa ka yahay kunool uga digay, inay u safraan magaalada Oslo. Isaga oo sheegay in faafitaanka xanuunka Covid-19 ee magaalada Oslo uu ka badanyahay wadamada ay dowlada dhexe ee ay Norway ka digeyso in loo safro.
Abrahamsen ayaa sheegay in marka uu arko sawirada laga soo qaado dadka Oslo kunool uu dareemayo inay ku jees-jeesayaan xeerarka xakameynta xanuunka covid-19. Maadaama ay hoosta isaga jiraan, iyaga oo aad moodo inay is ilawsanyihiin halista faafitaanka xanuunka.
Maalmihii ugu danbeeyay, waxaa soo badanayo tirada dadka xanuunka laga helay guud ahaan Norway, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Oslo.
Xigasho/kilde: Farsund-ordfører ber innbyggerne unngå Oslo-tur.
Previous articleW. Caafimaadka oo ka biyo diidan in la xiro xuduudaha Norway.
Next articleTrump oo lala cararay kaddib markii qof lagu toogtay meel u dhow Aqalka Cad.